Ciidanka Bileyska Somaliland oo xidhay Gudoomiyayaasha laba urur oo ah kuwii soo bixi waayey. | Saraar Media Forum Discussion
Ciidanka Bileyska Somaliland oo xidhay Gudoomiyayaasha laba urur oo ah kuwii soo bixi waayey.
Posted by B Tarabi on May 1, 2012 in News, Politics, Somaliland, Wararka Afsoomaliga, Wararka Xiisaha Leh · 0 Comments
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score) SaraarMedia(Hargeysa)Amar kasoo baxay Wasaarada Arimaha Gudaha ayay maanta Bilayska magaalada Hargeysi ku xidheen laba Gudoomiye oo ka mid ah sagaalkii Urur ee lagaga cudud roonaaday tartankii ururada siyaasada.
Gudoomiyaha ururka NDB Foosiya X Aadan iyo Axmed Sardoon oo ah gudoomiyaha Ururka Jamhuuriga iyo weliba madax kale oo ka mid ah Ururka NDB ayaa xabsiga loo kexeeyey kadib markii ay isugu yeedheen iyaga taageerayaashoodu inay mudaaharaad si nabada udhaca ka dhigaan caasimada hargeysa.
Bilayska magaalada Hargeysa oo bayr iyo baqdin weyn qaba isusoo bax kasta oo wax lagu diidanyahay ayaa si adag uga jawaabay arintaas,iyagoo madaxdii Ururada xabsiga dhigay dadweynihiina ku kala dareeriyey indho cadho leh.
Dhinaca kale ciidanka Bilayska ee sida gaarka utababaran RRU iyoSPU ayaa lagu daadiyey khayriyadaha magaalooyinka Burco iyo Berbera,iyadoo Bilaysku soo xuuraameen in Gudoomiye Dhego weyne oo qorshaha kula jirey labadaa urur ee kale uu isaguna mudaaharaad damacsanyahay oo uu shalay sii sheegay isagoo rajeynayey inuu taageerayaasha ugu badan ku leeyahay labadan magaalo.
Waxaa warar lagu kalsoonyahay sheegayaan in markay Bilaysku fashiliyeen xalay qorshihii Dhegoweyne ee Burco uu isla maanta magaalada Berbera magangelyo ugalay isagoo kasoo cararay caasimada labaad ee Burco.waxayna wararku intaa ku darayaan in ayaamahanba ay Bilayska iyo Gudoomiye Dhegoweyne ciyaarayeen dhuumaalaysi uu midba ka kale isha ku hayey.
Daawo: 8 Urur-siyaasadeed Ee Hadhay Oo Si Wada Jir Ah U Iclaamiyey Mudaharaad Saddex Cisho Socondoona Oo Ay kaga Soo Horjeedaan Go,aankii Gudida Diiwaan-galinta
Shirweynihii 1aad ee Urur-Siyaasadeedka RAYS oo Qabsoomay, laguna Doortay Hogaanka ururka iyo Gole Dhexe oo ka Kooban 123 Qof+GUDAHA KA AKHRI Magacyada 17 qof oo Guddida fulinta loo doortay
Urur Siyaasadeedka RAYS oo Magacaabay Gudida Qaban Qaabada Shirweynahooda 1′aad iyo Maalinta
Urur Siyaasadeedka UDHIS oo Magacaabay Guddida Qabanqaabada Shirweyniisa1aad iyo Waqtiga uu Qabsoomayo
Urur Siyaasadeedka RAYS oo Xafiiskiisii u Horeeyay ee Qurbaha Ka Furtay LONDON
Gudoomiyaha UDHIS (dhegoweyne) oo maanta ku dhawaaqay mudaaharaad.
gudoomiyayaashii ururada NDP iyo Jamhuuriga oo 5saacadood kadib lasoo daayey.